Malunga nathi -Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Izabelo Hengtai (Hong Kong) Co., Ltd. Yasekwa ngo-1996 Ingumsebenzi wenkampani ekumgangatho ophezulu we-crystal display display (LCD) yemodyuli yokubonisa i-crystal (LCM) yoPhuhliso kunye nokuveliswa kwephishini lobuchwephesha eliphezulu.
Idlulile i-SGS, i-TUV, i-BVQI, i-DNV kunye nolunye uqinisekiso lwamaziko; Ngenxa yeLCD ehambileyo, i-LCM imveliso yokuzihambisela kunye netekhnoloji yokuvelisa, ine-TN-LCD, i-STN-LCD, i-SMT-LCM, i-COB-LCM, i-COG-LCM, i-TFT-LCM, i-OLED-LCM njl njl. , owona mthamo wamachaphaza we-0.001mm, ubuncinci bomgca wobubanzi yi-0.003mm.
Izabelo Hengtai (Hong Kong) Co., Ltd. Yasekwa ngo-1996 Ingumsebenzi wenkampani ekumgangatho ophezulu we-crystal display display (LCD) yemodyuli yokubonisa i-crystal (LCM) yoPhuhliso kunye nokuveliswa kwephishini lobuchwephesha eliphezulu. Idlulile i-SGS, i-TUV, i-BVQI, i-DNV kunye nolunye uqinisekiso lwamaziko; ngenxa yeLCD ehambileyo, umgca weLCM wokuvelisa imveliso kunye netekhnoloji yokuvelisa, une-TN-LCD, STN-LCD, SMT-LCM, COB-LCM, COG-LCM, TFT-LCM, OLED-LCM njl. , owona mthamo wamachaphaza we-0.001mm, ubuncinci bomgca wobubanzi yi-0.003mm.
I-Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.ngoku ineemodyuli zokubonisa i-crystal standard (LCM) ezingama-400, kwaye uninzi lweemveliso zeLCD ziyimveliso eyenziwe ngokwezifiso ezivela kubathengi. Kwangelo xesha, silungile ukwenza ulungelelwaniso lwe-TFT-LCD, i-STN-LCD kunye ne-LCM ngeenkcukacha ezahlukeneyo kunye neemfuno ezahlukeneyo zobuchwephesha kubathengi. Okwangoku iimveliso ze-LCD zisetyenzisiwe kwizixhobo, izixhobo zombane zemoto, iithemometha, iimitha zoxinzelelo lwegazi, elektroniki isikali, iimitha zamandla obuchule, iimitha zamanzi, itafile yombane, iaudiyo, izixhobo zokupholisa umoya, ulawulo olukude, abapheki bokungenisa, iissager, iitreadmill, oomatshini bamanqatha, oomatshini bokufunda, izichazi magama zekhompyuter, iMP3, iiwotshi kunye neewotshi, izixhobo zokuhambisa amafutha zeCCC, unxibelelwano ngezezimali, ezonyango izixhobo, izixhobo zasekhaya, iimveliso zedijithali, ulawulo oluzenzekelayo lweshishini, izixhobo ezahlukeneyo zomatshini wabantu, izixhobo eziphathwayo, ulwazi lwezixhobo kunye neminye imimandla zisetyenziswa kakhulu ngabathengi, rhoqo ukuhlangabezana neemfuno zamashishini ahlukeneyo eemveliso zeLCD. Iimveliso zithembekile kwaye ziyanconywa ngabahlobo bamazwe aphesheya ngomgangatho wazo ophezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukuhanjiswa okukhawulezileyo, ixabiso elifanelekileyo, inkxaso yexesha elifanelekileyo kunye nengcinga yezobuchwephesha, kwaye baseke ubudlelwane bexesha elide bokusebenzisana.
Inkampani yaseHong Kong Hengtai ilandela umgaqo-nkqubo wolawulo we "Inzuzo esemgangathweni iphezulu kunayo yonke, inkonzo ifezekisa ikamva" kwaye ilandela umgangatho wokuqala kunye nophuhliso lwetekhnoloji. Ngokuqhubeka kokulawulwa kolawulo lweshishini, ekufuneni ubudlelwane bexesha elide bokusebenzisana ngokungazamiyo, ukunyaniseka okukhulu ekunikezeleni abathengi iimveliso kunye neenkonzo zontanga abakhokelayo. Siza kuhlala siphuhlisa kwaye sivelisa iimveliso ezingcono kunye nezingcono, kubathengi abanikela ingqalelo kumgangatho kunye nomfanekiso wegama.
Ngophuhliso olukhawulezayo lweshishini lokubonisa le-LCD, siya kulandelela ngokusondeleyo ukuphuculwa kobuchwephesha bokubonisa ubuchwephesha behlabathi, yinyani into entsha, ugcine uphucula! Abathengi bamkelekile ukubuza kunye noku-odola iimveliso zethu!
EIinjongo zeshishini: Ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokuqeqesha abasebenzi abakumgangatho ophezulu. Khokela uphuhliso lweshishini elibonisa ulwelo lwekristale kwaye wenze umvelisi weLCD wokuqala!
Umoya weshishini: Ukubeka abantu phambili, befuna inyani kwiinyani, beka izinto ezintsha, kwaye begqwesa rhoqo.
Ifilosofi yeshishini: Umgangatho ophezulu, ukuvelisa izinto ezintsha, ingqibelelo, i-rigorhi. Umgangatho ophezulu: Ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo zobugcisa. Innovation: faka iteknoloji yenkqubo entsha kwaye ngokuqhubekayo uyila entsha.
iimveliso kunye neetekhnoloji: Imfezeko: yamashishini sisiseko sophuhliso lweshishini. Ngaphandle kwengqibelelo alingani yonke into. Ubungqongqo: Zifunele ngokungqongqo kwaye uphathe ubudlelwane nabathengi ulumke ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo zobugcisa.